Duufaanta kuleylaha ah Elsa waxay mareysaa meel u dhow Furayaasha Florida oo leh saameyn yar
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Duufaanta kuleylaha ah Elsa waxay mareysaa meel u dhow Furayaasha Florida oo leh saameyn yar
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Jidka weyn ee Florida Keys Overseas Highway ayaa si buuxda u furan oo shaqaynaya, sidoo kale Madaarka Caalamiga ah ee Key West iyo Madaarka Caalamiga ah ee Florida Keys.
Saraakiisha Furayaasha Florida iyo shaqaalaha kaabayaasha ayaa soo sheegay kaliya saamayn yar oo ka jirta silsiladda jasiiradda.
Adeegyada furayaasha ayaa soo sheegay inaysan jirin koronto la'aan iyo isgaarsiintii oo aan hagaagsanayn.
Qaababka cimilada caadiga ah ee xagaaga ayaa ku soo noqonaya Furayaasha Arbacada.
Duufaanta Kulaylaha Elsa waxay ag martay meel u dhow Furayaasha Florida ee Hoose iyo Key West Talaado, Luulyo 6 -keeda, oo ka tagaysa oo keliya saamayn yar.
Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta Xarunta Duufaanta Qaranka, intii ay ku dhawaatay silsiladda jasiiradda Keys abbaaraha duhurnimadii Talaadada, xarunta duufaanku waxay qiyaastii 55 mayl u jirtay galbeedka Key West. Waqtigaas Elsa waxay ahayd duufaan kulayl leh oo leh 60 mph dabaylo, in kasta oo dabaylaha joogtaynta ugu sarreeya Key West dareemay inay ahaayeen qiyaastii 40-45 mph sida ay sheegeen saadaaliyaasha Xafiiska Adeegyada Cimilada Qaranka ee Florida.
The Furaha Florida Waddada Dibedda ayaa si buuxda u furan oo shaqaysa, sidoo kale Madaarka Caalamiga ah ee Key West iyo Florida Keys Marathon International Airport.
Hawlaha duulimaadyada ganacsiga ee Key West International waa inay ku noqdaan jadwalka caadiga ah duhurkii Arbacada, sida uu sheegay Agaasimaha Madaarada Monroe County Richard Strickland. Wuxuu u soo jeediyay rakaabku inay la xiriiraan shirkadaha diyaaradaha si loo xaqiijiyo waqtiyada bixitaanka iyo imaanshaha.
Saraakiisha furayaasha iyo shaqaalaha kaabayaasha ayaa ka warbixiyey saamayn yar oo keliya silsiladda jasiiradda. Key West, afhayeenka Alyson Crean ayaa sheegay in qaar ka mid ah geedaha hoos u dhacay iyo biyo -mareennada duufaanka ee la xannibay ay nadiifiyeen shaqaalaha magaalada. Qaar ka mid ah waddooyinka magaalada ayaa biyo buuxiyay, laakiin galabnimadii Talaadada ayay biyihii yaraadeen.
Habeenkii Talaadada, korontada Furayaasha ayaa soo sheegay in korontada ka go'day iyo isgaarsiintii oo dhan.